Inhloko-dolobha ye-Ukraine inomlando original kakhulu futhi ekhangayo, ukuhlangabezana okuyinto ingathunyelwa ku uhambo indawo. Ukunakwa zonke izivakashi edolobheni kwasekuqaleni edonsela Independence Square, okuyinto nje endaweni yomphakathi ephakathi. Isinqe salo zenzeka ngonyaka 1850 kodwa ngo-2001 lapho Kwakuseshwa umsebenzi wokulungisa. Kuze kube manje, it is ehlotshiswe nemithombo izikhumbuzo, futhi lokhu yilapho imikhosi mass kwenzekani amaholide. Ikakhulukazi le ndawo ibukeka omkhulu ebusuku ukukhanyisa.
Kuyinto kule ngxenye yedolobha tibheke le izikhungo ebaluleke kakhulu. Lapha ungathola yindawo enhle ukuhlala uma unquma ukuhlala e Kiev, hhayi usuku olulodwa. Vele esinye salezi iyona ehhotela "Kiev". Itholakala Lukyanovka, lapho zokuthutha omuhle kakhulu ezokwenza kalula ukufinyelela cishe kunoma iyiphi ingxenye yomuzi. amakamelo esikahle futhi zikhululekile kusukela ekilasini umnotho ukuze sokunethezeka, ngoba lapha ukuthola indawo ngokwabo futhi wonke umuntu can.
Kodwa kukhona okuningi ubucebi ufanelwe ukuqashelwa. Ikakhulukazi Monastery Kiev-Pechersk Lavra, ositshela okuningi ngomlando wabantu Ukraine. Emihumeni bayo basendulo igcinwe eziningi eziyimfihlakalo ezingaxazululeki, nasekubulaleni nemiklamo yokwakha kuthinta ehlweni lomuntu. Kiev-Pechersk Lavra senziwa "baraque Ukraine" isitayela ayimkhangi eningi ezintweni zokunethezeka yayo nengcebo.
Ngizothanda futhi ukubalula izimpawu zendawo eyodwa ngaphezulu hhayi kangako, okubaluleke - St Sophia Cathedral. isisekelo salo sabekwa omkhulu Prince Yaroslav Ohlakaniphile ekuqaleni kwekhulu leshumi nanye. Okubalulekile Kuyaphawuleka ukuthi kwaba St Sophia Cathedral kanye Kyïv Pechersk Lavra ekhulwini leminyaka elidlule kuze wenziwa waba UNESCO Site. yasezindongeni abahlukile kuhlobisa izindonga lombhishobhi, ukuvula ukuvakasha nesizotha wangempela inganekwane. KaMose "Oranta" kuthandwa kakhulu phakathi izivakashi. Zonke izindonga yezinsika izithombe ubuso abangcwele, bona-ke okwakumelwe, ezakha onkulunkulu yobuKristu.
Kiev endaweni ababekuyo, nsuku zonke uyoba nethuba ukubona into entsha futhi akumangalisi lokhu. Futhi ngemuva kosuku ematasa kangaka, ungavakashela Park Hotel Kiev "Ngezinye Lukyanovka", etholakala Awukude ke. Izikhonzi unakekele ukuphumula ngokwanele, ukuqinisekisa ukuthula futhi akududuze. Futhi zonke izivakashi zikwazi ngamanani akhokhelekayo.
Military sezempilo "Aurora" (spa) kweselula
Krasnoyarsk City: Beaches, yabagibeli
IRoyal Palace, ikheli Amsterdam, isithombe, ubungcweti, ngempela
Miami Airport - ehola sezindiza esibulalayo mpumalanga Florida (USA): umlando, ingqalasizinda, ukudluliswa
Yini okumele uyenze uma ungasebenzi yokunamathisela yakho?
Nobuhle nokucwala Kaliningrad: baphi amasevisi elihunyushwe futhi
Kuyini sombhalo? Ukusebenza izinhlelo lokucubungula igama